'अंकितलाई फिल्ममा पाउँदा खुसि छु'
प्रकाशित : शनिबार, भदौ २८, २०७६१२:३१
फिल्म । पुराना निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा निर्देशित ‘रातो टीका निधारमा’ आउँदो असोज १० मा प्रदर्शन हुदैछ । उनले गत वर्ष ‘जय भोले’ दर्शकसामु ल्याएका थिए । त्यसयता उनि फिल्म निर्माण तथा निर्देशनमा निरन्तर छन् । ‘जय भोले’ अगाडी उनले यो फिल्मी यात्रालाई झन्डै १२ वर्ष विश्राम दिएका थिए । दसैँमा सर्वाधिक बज्ने गीत मध्यको एक हो ‘रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो’।
शर्मा निर्देशित ‘अल्लारे’ मा समावेश यहि गीतको टाइटल सापटी लिदै अशोकले नै निर्माण तथा निर्देशन गरेको ‘रातो टीका निधारमा’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरेका छन् । दसैँको झल्को दिने गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरु अंकित शर्मा र साम्राज्ञी आरएल शाहसँगै सबै दसैँको टीकामा फिचर्ड छन् । अंकित अशोककै छोरा हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै अंकितले फिल्मनगरी नै छानेकोमा आफु उत्साहित रहेको अशोकले बताए । ‘जुन क्षेत्रले हामीलाई नाम , दाम र सम्मान दियो त्यसैमा आज मेरो छोरा आउँदा निकै उत्साहित छु’ अशोकले भने ।
उनलाई अंकितले अघिल्लो फिल्म ‘जय भोले’ मा पनि निर्देशनमा सघाएका थिए । ‘मेरो सन्तानले मेरै क्षेत्रलाई माया गर्नु भन्ने लागेको थियो र त्यो पुरा हुँदा मेरो खुसिको सिमा छैन’ अशोक भन्छन् ,’अंकितलाई मैले ब्रेक दिए तर अब उ आफ्नै क्षमताले अगाडी आउनुपर्छ ।’ उनले उपस्थित माँझ अंकितको जन्मको बेलाको घटना पनि सुनाए । एक हिसाबले उनले अंकितको माया मरिसकेका थिए । ‘मलाइ डाक्टरले आमा र बच्चामा एउटा बचाउनु पर्छ भनेर भनिसकेका थिए तर भगवानको कृपाले अंकित हामीसँग छ’ उनले अंकितलाई बचाउने डाक्टरलाई पनि धन्यवाद दिए । अभिनेता राजेश हमाल र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर फिचर्ड चर्चित गीत ‘रातो टीका निधारमा’लाई यसफिल्ममा रि-एरेञ्ज गरिएको छ ।
गीतलाई प्रमोद खरेल र मेलिना राईले गाएका छन् भने यसलाई पहिलेकै संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाले तयार पारेका हुन् । किरण शर्मा र कृति शर्माले निर्माण गर्ने यस फिल्ममा नीता ढुंगाना, रविन्द्र झा, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल, शिवहरी पौडेल, लक्ष्मी गिरी, बसुन्धारा भुषाललगायतका कलाकारहरुको फिल्ममा अभिनय रहेकोछ ।
पूर्वका विभिन्न स्थानमा छायांकन हुने फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेकाछन् । यसमा शम्भुजितसँगै कल्याण सिंहको संगीत रहेकोछ । बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी, मित्र देव गुरुङको सम्पादन रहने फिल्मका गीतमा प्रमोद खरेल, मेलिना राई, निशान भट्टराई र अस्मिता अधिकारीले आवाज भरेका छन् । फिल्मका लागि सहदेव ढुंगाना, डा. कृष्णहरि बराल र वि. मल्लले गीत लेखेका छन् ।
निर्देशकहरुको राहत प्राविधिकलाई